Hargeysa(Dawan)- Agaasimaha Hay’adda dhawrista Tayada Somaliland, Maxamed Geeddi Caynaanshe, ayaa ka hadlay raashin iyo buskud ay dekedda Berbera ku qabteen, oo ay dib ugu celiyeen dalalkii laga keenay iyo sababaha ay u celiyeen.
Waxaanu sheegay in Daqiiq ay lahayd mid ka mid ah shirkadaha waddaniga ah, oo laga keenay dalka Masar, intii aanay soo gaadhin marsada Berbera in ay kkananka hoose ee Markabkii siday qayb ka mid ahi ay ku soo qoyday, taasina ay sababta in daqiiq ka badan toban kun oo kiish ay qoyday oo ay noqotay, wax aan la isticmaali Karin. ka dibna ay wada eegeen dhammaan intii qoyday, isla markaana ay shirkadda u qoreen hay’ada ahaan in daqiiqdaasi ay markabka gudihiisa ku soo xumaatay oo ay ku soo qoyday, laguna celiyay markabkii siday oo dib loogu dhoofiyay dalka Masar oo laga keenay.
Agaasimaha Hay’adda dhawrista Tayada Somaliland, sidoo kale waxa uu ka hadlay Buskud, isna qaybo ka mid ahi uu soo qoyay oo ay dekeda Berbera ku qabteen oo ay maanta oo Sabti ah dib ugu celinayaan dalkii uu ka yimid.
Mudane Maxamed Geeddi Caynaan, waxa kale oo uu ka hadlay shaybaadhka shidaalka oo ay hadda gacanta ku hayso hay’adda dhawrista tayada Somaliland, isla markaana ay ka hawl galaan shaqaale khibrad u leh hubinta tayada shidaalka oo hay’addooda ka tirsan, waxaanu soo jeediyay in ganacsatadii markii hore gacanta ku haysay toos loogala soo wareego, iyagana loo celiyo wixii ka maqan ee ay geliyeen, si loo fuliyo go’aankii Madaxweynaha ee ahaa in shaybaadhka Shidaalku ku soo noqdo gacanta dawladda.
Agaasimaha, ayaa sidaa ku sheegay waraysi gaar ah oo uu wargayska Dawan ku siiyay khadka Taleefanka.
Agaasimaha oo la waydiiyay daqiiq ay qabteen oo la sheegay inay dhacday cidda dalka keentay iyo halka ay ka timi, ayaa ku jawaabay. “Horta daqiiq dhacday oo dalka soo gashay may jirin, laakiin si qaldan ayay warbaahintu u fahantay una tebisay. Balse waxa jirtay daqiiq ganacsi oo ay leedahay shirkadda Omaar oo laga keenay dalka Masar, daqiiqdaas intii ay soo rarnayd ee ay badda ku soo jirtay, ayay qaybtii ku jirtay khananka hoose ee Markabkii siday, waxaa gaadhay biyo oo way qoyday, waanay is qoysay, daqiiqdii qoydayna way xumaatay oo waxay noqotay wax aan la isticmaali Karin, markaanau aragnay dhammaan daqiiqdii Markabka saarnayd, ayaanu wada baadhnay, waxaana qoyay oo wax dhintay noqday 10224 kiish (toban kun laba boqol iyo labaatan iyo afar kiish), markii intii qoyday aanu wada hubinay, waxaannu dib ugu celinay Markabkii siday, caddaynna waanu u qornay shirkaddii daqiiqdaas lahayd, taas oo caddaynaysa in qasaaraha daqiiqdan ku yimi uu ka dhashay biyo markabka gudihiisa ku gaadhay intaanu soo gaadhin Somaliland. waxaana dib loogu celiyay dalka Masar oo markii horena laga keenay oo ay shirkaddu kula xisaabtami doonto. Shirkaddana waanu ka raali gelinaynaa warkaa sida qaldan warbaahinta uga baxay ee lagu sheegay in daqiiq dhacday ay dalka keeneen.”
Agaasimaha oo la waydiiyay in ay jiraan alaabooyin kale oo ay qabteen, ayaa ku jawaabay. “Imika waxaannu gacanta ku haynaa oo ay hawshiisii noo soo dhammaatay, Buskud isna qaybo ka mid ahi ay Markabkii siday ku soo qoyday oo aanu wada eegnay, isla markaana aanu berry (maanta) oo Sabti ah aanu dib ugu celinayno halkii laga keenay. Buskudkaas oo dhan siddeed boqol iyo labaatan kartoon (820) oo ay leedahay shirkadda Al-Furaad. waxaanan samaynaa marka ay shirkadaha ganacsi ku yimaadaan qasaaraha noocaas ahi, waxay u kala baxaan laba qaybood oo shirkadaha waawayn ee dalkeena qaar caymis ayay ku jiraan oo wixii iyaga oo aan soo gaadhin Somaliland qasaare ku yimaado, way helayaan oo shirkaddii ay ka soo iibsadeen ayay ku leeyihiin, kuwa kalena waa qaar aan caymis ku jirin oo suuqyada wax ka soo iibsada, kuwaasina waxay u baahan yihiin in ay helaan caddayn ay ula tagaan halkii ay wax ka soo iibsadeen ee Markabka u soo rartay, markaa labada qaybood ba waraaqaha waxyeelada badeecada soo gaadhay iyo halkay ku soo gaadhay ayaannu u samaynaa, si aanu u illaalino in shirkadaha aanu qaasare soo gaadhin. waxa kale oo mudnaanta koobaad ay tahay oo aannu xil iska saarnaa in aanay shiraduhu waxyaabaha qasaaraha noocaas ahi uu soo gaadhay inta ay dib u farsameeyaan in aanay dadka dib uga iibin oo aanay suuqyada soo gelin wax aan la isticmaali Karin. markaa badqabka waxa ay dadka ka iibinayaan iyo in aanay iyaga dhibaato qasaare ku iman, labada ba xilka naga saaran ayaan ka gudanaa.”
Agaasimaha oo la waydiiyay hadda cidda gacanta ku haysa shaybaadhkii shidaalka ee Berbera, ayaa yidhi. “Iminka waxa ka hawl gala oo ka shaqeeya isla markaana shidaalka eega shaqaale ka tirsan Hay’adda dhawrista Tayada oo khibrad wanaagsan u leh baadhista noocyada shidaalka ee kala duwan, laakiin waxaan codsanaynaa in si toos ah gacanta dawladda loogu soo celiyo shybaadhka Shidaalka. Iyada oo la fulinayo amarkii Madaxweynaha ee ahaa in gacanta dawladda lagu soo celinayo shaybaadhka shidaalka, isla markaana ganacsatadii markii hore gacanta ku haysay loo celyo wixii ka galay ee ay leeyihiin.”
Agaasimha, ayaa dhinaca kale bulshada Somaliland u ballan qaaday in ay ka go’an tahay in cunno iyo alaab ba ay ka hubiyaan tayadooda oo aan dalka wax kasta la iska keeni Karin, waxaanu yidhi “Waxaan u sheegayaa bulshada Somaliland in hay’addu ka hawl gasho dhammaan kastamada dalka, oo ay hubiso waxa laga soo geliyo, isla markaana aannu hubinno oo aanu eegno, wax kasta oo dalka la soo gelinayo oo cunto iyo alaabba ah. waxa kale oo noo qorshaysan sida Madaxweynuhu noo ballan qaaday in sannadka dambe dalka la keeni doono shaybaadh caalami ah oo wax kasta lagu eegi doono tayadooda, imikana waxaannu wax ku eegnaa qaabab kala duwan oo shaqaale aanu soo tababarnay ay eegaan. waxa kale oo aanu eegnaa dhammaan waraaqaha lagu soo iibiyay alaabooyinka kala duwan ee dalka soo gelaya oo kala ah ta kambaniga laga soo iibsaday, ta hay’adda tayada ee soo xaqiijisay iyo ta dalkii ay ka timi uu u soo gooyay ee ay kaga soo baxday, waxyaabaha aanu ka shakinana waxaannu xidhiidh la samaynaa kambaniyada waraaqaha la sito ku qoran ee ay ka so bexeen.” ayuu yidhi Agaasimaha Hay’adda dhawrista Tayada Somaliland Maxamed Geeddi Caynaanshe oo u warramayay wargayska Dawan.